चर्चा ८ स्टारको : फिल्मबाट पर र फुर्सदिला « Ramailo छ
चर्चा ८ स्टारको : फिल्मबाट पर र फुर्सदिला
कुनै समय निकै चर्चा र व्यस्त रहेका थुप्रै नायकहरु अहिले फुर्सदमा छन् । या भनौं पर्दाका हिट हिरो फिल्मी दुनियाँबाट पर छन् । धेरैले विदेशमा नयाँ जीवन सुरु गरेका छन् भने केही स्वदेशमै रहेर आफ्नो स्टारडम फर्काउने कसरत गरिरहेका छन् । हामी यहाँ एक समयका जल्दाबल्दा तर अहिले फिल्मबाट फुर्सदमा रहेका नायकको चर्चा गर्दैछौं :
राजेश हमाल नेपाली फिल्मका सर्वाधिक चर्चित र धेरै फिल्म खेल्ने नायक हुन् । महानायकको उपमा पाएका राजेश हमाल जति चर्चा र सफलता सायदै अब कुनै नायकले पाउलान् । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा झण्डै तीन दशक राज गरेका महानायक हमाल अहिले फिल्मबाट फुर्सदमा छन् । ‘युग देखि युग सम्म’ बाट आफ्नो फिल्मी करिअर सुरु गरेका राजेश हमालको युग सकिएकै हो त ? उसो त पछिल्लो समय उनले अभिनय गरेका फिल्महरु लगालग असफल भैरहेका छन् । महानायकले खेलेका ‘बाग्मती’ र ‘सकुन्तला’ जस्ता फिल्मले दर्शकलाई हलमा तान्न सकेनन् । फिल्मबाट फुर्सदमा रहेका राजेश हमाल देश तथा विदेशमा हुने कार्यक्रममा भने निकै व्यस्त छन् । उसो त महानायक हमालले फिल्म निर्माण र निर्देशन गर्ने चर्चा बेला बेलामा भैरहन्छ ।
दुर्गा, डन, हिम्मत र किस्मत जस्ता फिल्ममा खतरनाक एक्सन दिएका एक्सन हिरो विराज भट्टको फिल्म करिअर अहिले सुस्त छ । एक समय भोजपुरी फिल्ममा व्यस्त रहेका विराजले नेपाली फिल्म ‘जय पर्शुराम’ खेले । स्टारडम फर्काउन खेलेको उक्त फिल्म आशा गरे अनुरुप नचलेपछि विराजले पुनः नेपाली फिल्म खेल्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । भोजपुरी फिल्ममा पनि खासै व्यस्त नरहेका विराज सायद नेपाली फिल्ममा आफ्नो स्टारडम फर्काउने सोचमा छन् । तर कहिले फर्किन्छन् ? त्यो टुंगो लागेको छैन ।
एक समय नेपाली फिल्ममा निखिल उप्रेती र एक्सन उस्ता उस्तै थिए । ‘पिंजडा’ बाट आफ्नो सुनौलो फिल्म करिअर सुरुवात गरेका निखिल अहिले फुर्सदमा छन् भन्दा हुन्छ । उनी अभिनित पछिल्ला फिल्महरु लगालग असफल भएपछि निखिल अहिले नयाँ गर्ने सोचमा छन् । मुम्बइ बाट फर्किएपछि निखिलले खेलेको भैरे हिट भएको थियो । तर ‘निर्भय’, ‘रुद्र’ र ‘राधे’ जस्ता फिल्मले निखिललाई फुर्सदिलो बनाइदियो ।
एक फिल्मको दृश्यमा सुमन
सुमन सिहं पनि नेपाली फिल्ममा जमेका नायक हुन् । एक समय यस्तो थियो, सातामा सुमन अभिनित फिल्महरु आपसमा जुधिरहेका हुन्थे । तर विडम्वडा, सुमनले खेलेका कुनै पनि फिल्महरु ब्ल्कबस्टर भएनन् । यसैले उनी फिल्मबाट टाढा हुन बाध्य भए । अमेरिका र नेपाल गरिरहेपनि सुमन फिल्ममा फर्कन सकिरहेका छैनन् । सुमन फिल्मबाट अहिले पूर्ण रुपमा फुर्सदमा छन् ।
एक समयका स्टार नायक हुन्, जीवन लुईंटेल । थुप्रै हिट फिल्म दिएका जीवनको केही वर्षदेखि फिल्ममा उपस्थिति शून्य छ । हाल उनी परिवार सहित अमेरिका छन् । बेला बेला नेपाल आएपनि जीवनले फिल्म खेल्ने चासो देखाएका छैनन् । ‘नाई न भन्नु ल’, ‘अन्दाज’, ‘नोटबुक’, ‘रिदम’ जस्ता हिट फिल्ममा अभिनय गरेका जीवन फेरी काँचको पर्दामा फर्किएलान् ?
पर्खि बसे डेव्य नायक राजवल्लभ कोइरलाको एक समय फिल्ममा राम्रो माग थियो । बोद्धिक हिरोका रुपमा चिनिने नायक बल्लभ लामो समयदेखि फिल्मबाट पर छन् । आफ्नो परिवासँग अमेरिकामा रहेका राजवल्लभ पनि कमब्याकको सोचमा छन् । ‘मसान’, ‘अपवाद’ जस्ता फिल्ममा अभिनय गरेका वल्लभलाई नेपाली दर्शकले मिस गरिरहेका छन् । तर उनी तत्काल फिल्ममा फर्किएलान् भन्न चाहिं गाह्रै छ ।
रेखा थापाको फिल्म ‘हिफाजत’ बाट फिल्मी करियर सुरु गरेका आयुष रिजालको एक समय नेपाली र भोजपुरी फिल्ममा राम्रो माग थियो । झण्डै तीन दर्जन फिल्ममा अभिनय गरेका आयुष अहिले भने फुर्सदमा छन् । भर्खरै प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘ब्ल्याक’ ले पनि आयुषको करिअरलाई ‘ब्लास्ट’ गर्न सकेन ।
स्वदेशमै रहेपनि नायक सविन श्रेष्ठलाई केही सालदेखि फिल्म क्षेत्र फापिरहेका छैन । सविनले फिल्म त खेलिरहेका छन् तर खेल्नका लागि । अन्दाज फिल्मपछि डिमान्डेड भएका सविन अहिले उति सक्रिय छैनन् । रेखा थापालाई लिएर ‘हिरो रिटन्र्स’ बनाएका सविन बरु आफ्नो शरीर सुगठिलो बनाउँनतिर लागेका छन् । सविनको त्यो शरीरले कहिले पाउँला त सुहाउँदो काम ?